China 3-Tier ọla edo na-edozi mgbidi na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ |SS Osisi
Ụdị No.: MO610
Akụkụ: 60 x 15 x 60H cm
Nbudata kacha: 10kg (22lbs)
NW: 1.83 n'arọ
Redlọ Akwụkwọ Ọgwụ Na-ezighi ezi: 3 Toless Gold Wall na-agbada n'elu osisi na bọọdụ na-agbanwe agbanwe, kwesịrị ekwesị maka akwụkwọ dị iche iche dị iche iche.Nha mkpisiaka: 23.6" x 5.9".Nha bọọdụ: 23.6" x 5.1".Ihe nchekwa osisi arụpụtara nke ọma Max na-ebufe 22lbs.
● AKWỤKWỌ Mgbidi na-arụ ọrụ: Nhọrọ zuru oke maka ịhazi ihe omume ntụrụndụ, osisi ndị na-egbuke egbuke, nka, foto foto, ihe ụmụaka ji egwuri egwu, ụlọ mposi n'ime ụlọ, ime ụlọ, ụlọ ịsa ahụ, ụlọ ọrụ, kichin, ụlọ nri na ebe a na-elekọta ụmụaka.N'elu etemeete ihe efu nchekwa obere ihe na ihe ịchọ mma.
● Ngosipụta ihe ngosi ọgbara ọhụrụ: ọla edo gbara ọchịchịrị na agba ọcha dabara, dị mfe ma dabara adaba.Shelf ndị a na-ese n'elu mmiri ọ bụghị naanị na-eme ka ọkụ nke ụlọ ọ bụla dị ugbu a na-eme ka ọ dịkwuo mma, kamakwa na-eme ka ihe ịchọ mma mara mma dabara n'ụdị ọ bụla ma ọ bụ ụdị ụlọ.
● Ihe siri ike na-adị mfe ịwụnye: sọlfọ na-adịgide na osisi osisi na-adịgide adịgide, ntuziaka zuru ezu dị mkpa iji dozie shelves ndị a na mgbidi na ịnọgide na-arụ ọrụ ha.
● Ihe mere e ji ahọrọ ngwaahịa anyị: Ọdịdị siri ike, nrụnye dị mfe na nhazi mara mma na-eme ka nke a bụrụ nnukwu mgbakwunye na ụlọ gị.Ha bụ ụzọ dị egwu iji gosipụta mkpokọta dịka onyinye pụrụ iche nye ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị enyi gị.Emepụtara site na ahịrị mmepụta anyị dị oke ọnụ ahịa, na-enye gị ngwaahịa dị elu na ọmarịcha ngwaahịa.
SS Osisi Shelves Ngwọta
Oghere ala ala gị dị oke ọnụ ahịa ọ na-apụ n'anya ka ebe nchekwa na-eweghara?
Ị na-achọ ihe enyemaka ma ọ bụ ihe siri ike na-ese n'elu mmiri maka ngwa ọgbaghara ahaziri ahazi ma chọọkwa ụlọ gị mma?
Ee, SS Osisi na-ese n'elu mmiri dabara adaba ịghara ime ya.
Ndị na-emepụta nkà anyị na-emepụta ma mepụta ya iji jide n'aka na ọ bụghị nanị na ha na-arụ ọrụ kamakwa na-achọ mma.
Emepụtara site na ahịrị mmepụta anyị dị oke ọnụ ahịa, na-enye gị ngwaahịa dị elu na ọmarịcha ngwaahịa.
Nke gara aga: Tebụl njikwa rustic 3-Tiers nwere shelf
Osote: Oche nchekwa na akwa akpụkpọ ụkwụ